वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत श्रमिक छोराको तर्फबाट ,आमालाई पार्सल:कथा। - Malayakhabar
होम पेज प्रवास विशेष वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत श्रमिक छोराको तर्फबाट ,आमालाई पार्सल:कथा।
कथा: आमालाई पार्सल ,
लेखक :- जीवन देवान गाउँले ,,
एस.आई.क्यासकेट कम्पनीले फलोअप गरिरहेको रहेछ । कम्पनीको मान्छेसँग सलायाङ हस्पिटल स्थित शव–कक्षको प्रतिक्षालयमा भेट भयो । उसैले काउन्टरमा कुरा राख्यो र शवगृहका कर्मचारीले हामीलाई लास राख्ने चिसो कोठामा पुर्यायो।
हामी भन्नाले मृतकसँग एउटै कम्पनीमा काम गर्ने साथी, लास नेपाल पठाउन सहयोग गर्न तत्पर संस्थाका प्रतिनिधि र म –लाई कर्मचारीले यार्क जस्तो बकास तानेर लास देखाई दियो । जसै, बकास भित्र थुनिएको चिसो वाफ र ह्वास्स गन्ध नाकैमा ठोक्कियो अनि पहेलिदै गएको अनुहार देखा पर्यो ।
केही दिन अगाडी सम्म सँगै काम गरेका साथीले भनिदिए –दाई नै हो ।
उसले मात्रैतेति भनिदिनु पर्ने थियो –केवल औपचारकिताको लागि । किनकी मृतक को हो ? भन्ने जानकारी त थियो नै, तर अरुकसैको डकुमेन्टबाट हस्पिटल भर्ना भएको हुदा वास्तविक नाम सच्याउनु पर्ने हुन्थ्यो । हो त्यही नाम नमिलेको कारण कागजी प्रकृयाले सनाखत गरिदिनु पर्ने माग गर्यो । र, हामी लासको पहिचान गर्न शवगृहको चिसो कोठामा उभिएका थियौ ।
मैले भनिसकेको छु कि पहिचान गर्नु केवल औपचारिकताको लागि मात्रै हाे । क्यासकेट कम्पनीले नै आवश्यक कागजात तयार गर्दै रहेछ । नेपालबाट पनि शव चाँडो पठाईदिए हुने आसयको कल तारन्तार आईरहेको थियो । नेपालमा शव रिसिभ गर्नेको विवरण खुलाएर फर्म भर्नु पर्ने रहेछ । काउन्टरको कर्मचारीले मागेको विवरण हामीले टिपायौ । त्यसपछि क्यासकेट कम्पनीले हामीलाई फ्लाईट कन्फर्म गरेर जानकारी दिने कुरो भयो।
‘घर परिवारसँग बेखवर भएर नेपाली केटाहरु मलेसियामा गुमनाम बस्नुको कारण के होला ?’ –मलाई समेत ट्याग गरेर कसैले स्टाटस पोष्ट गरेको रहेछ । कम्प्युटर अगाडी बसेर फेसबुक लगईन गर्ने बितिकै स्क्रिनमा फुत्त देखा पर्यो । सोचे,– ‘उसले जुन उदेश्यले स्टाटस लेखेको होस तर मेरो पनि धारणा जान्न चाहेको हुन सक्छ । नत्र किन ट्याग गर्यो त !’
दिउसो मात्रै घरपरिवारसँग वेखवर भएर गुमनाम बसिरहेका एकजना पात्रलाई अस्पतालको शवगृहमा भटेर आएको छु । यसरी बेखवर बस्नुको कारण के थियो ? –परको लोकमा पुगिसकेको पात्रलाई सोध्ने कुरा भएन । वरको लोकमा छदै भेट्न सकेको भए एउटा खास जवाफ पाईन्थ्यो कि !
म आफ्नो धारण दर्ता गराउनु पहिला कमेन्टबक्स खोतल्न थाल्छु । माउसमा औला जोतेर उधिन्दै एकएक प्रतिकृया निकाल्छु।
–लट्री(टोटो, म्यागनम, कुडा –जुन हरेक हप्ताको सनिवार, आईतवार, वुधवार ड्र गर्छ भने महिनाको पहिलो र अन्तिम हप्ताको मंगलवार स्पेशल–ड्र को नाममा खुल्ने गर्छ ।) फस्ने लाससमा फसेर ।
–ईण्डोन, फिलिपिना, भेतनामी, कम्बाेडियन केटीहरुको मायाजालमा उनिएर ।
–श्रीमतीले घर ब्यवहार बिगारेर ।
कमेन्टहरु मध्येबाट टिपोट गर्नु पर्दा मलाई समेत पत्यार लागेका प्रतिकृया थिए यि ।
उसो त रत्नदाई पनि घर–परिवारसंग बेखवर भएर बसिरहेका थिए । मृत्युको अन्तिम घडिसम्म पनि घर–परिवारसंग उहाले सम्पर्क गरेको पाईएन । किन त ? कारण बताउन उहा जिवित हुनुहुन्न। यद्पी केही संकेत त भेटिएला कि ! भन्ने ठानेर पिएनसिसि नामक संस्थाले डकुमेन्ट्री बनाउने क्रममा उहाको आमासंग गरेको वार्तालाप सुन्नलाई पुनः यु–ट्याुव भित्र पस्छु । र, सुन्छु आमालाई मात्रै –दोहोर्याई दोहोर्याई।
आमालाई सुनिसके पछि फेसबुकमा बसिरहन मन अडिएन । कमेन्ट दर्ज नगरी–लग आउट गर्छु । जिन्दगीको रंङ उड्दै गएको आमाको अनुहारले आँखा भरीएर आउछ । कम्प्युटर नै सट डाउन गरेर विरक्तिलो एकलाप बहकिन्छु म,:–
‘छोरा आउछ । तर कहिले आाउछ ! आउनु चै आउछ ।’ भनेर केही बर्ष अगाडी मात्रै छोरा माथिको आफ्नो विश्वास रेकर्ड गराउनु भएको रहेछ । हजुरको यही रेकर्डेड दृढ विश्वासले आज म तिलमिलाएको छु । सोच्दैछु, यदी पिएनसिसि नामक संस्थाले हजुरहरू जस्तासम्म पुगेर परदेशी आफन्तको ‘अनन्त पर्खाई…’मा बसेकाहरूको आवाज र दृश्यलाई डकुमेन्ट्रीमा कैद नगरेको हुन्थ्यो भने सायद म हजुरको छोराको शव नेपाल फर्काउनमा सकृय हुने थिईन । धन्न ! हजुरले केमेरा भिरेर गाउँ पसेकाहरूको भरोसा गर्नु भयो । तिनीहरूको केमेरा अघि उभिएर मन भित्रको वेदना पोख्ने सहास गर्नु भयो । ‘आफ्नो पीर–बेथा आफुसंगै छ, दुनियालाई कहेर के हुन्छ ?’ पनि त भन्दिन सक्नु हुन्थ्यो नि !
सम्भवतः छोराको मृत्यूको खवर आमाले कसैमार्फत पाउनु भयो होला ! तर, मैले चै मलेसियाबाट प्रकाशन हुने पत्रिकाबाट थाहा पाएको हुँ । ‘मलेसियामा रत्न दाईको निधन, शव अलपत्र’ शिर्षकमा प्रकाशित समाचारलाई मैले अर्को एउटा दुःखद घट्नाको निरन्तरताको रूपमा मात्रै लिएको थिए । किनभने विचल्ली, मृत्यू, शव अलपत्र जस्ता समाचारहरू हुनु र सुनिनु मलेसियाको हकमा सामान्य जस्तै हुदै जादैछ । वा, भनौ यस्ता घट्नाहरूलाई सामान्नीकरण गर्न अभ्यास्त हुदैछौ । फेरी, घर–परिवारसंग पूर्ण रूपमा बेखवर भएर बसोबास गर्नेहरू आफैमा अलपत्र पात्र हुन् । त्यसैले अलपत्रेहरूको मृत्यू नै अलपत्र अवस्थाको हुन्छ भने शव अलपत्र त हुने नै भयो नि ! तर, पुत्र शोकमा डुबेकी आमालाई मथिङगलमा राखेर दोहोर्याई तेहेर्याई उक्त डकुमेन्ट्री हेरे पछि भने अलपत्र भनिएको शवलाई अलपत्रै छाड्नु हुन्छ भन्ने लाग्दै लागेन । ‘छोरा आउछ’ आफूले जन्म दिएको छोरा प्रति हजुरको कत्रो विश्वास ! हजुरको त्यही दृढ विश्वासले मलाई रन्थनाएर हार–गुहार गर्ने अवस्थामा पुर्याएको हो, ताकी सन्तान प्रति आमाहरुको विश्वासमा विचलन नआओस । त्यहिभएर म ढुनमुनिदै पिएनसिसि प्रतिनिधि र किरात याक्थुङ चुम्लुङ मलेसिया सम्म गुहार माग्नु पुगे । निश्प्राण नै सहि आज उहाहरुकै सहयोगमा हजुरको विश्वासलाई डगमगाउन नदिने प्रयत्न सफल भएको छ । अर्थात, वकासमा सिलबन्दी भएरै भए पनि हजुरको छोरा घर आउदैछ ।
आमा ! अलिकति यथार्थ बताउछु । कुनै समय थियो जुन बेला यस्ता घट्नाहरू आम सरोकारको विषय बन्थ्यो । यस्ता घट्नाहरूको समाधानमा ऐकबद्धता जुटाउन सहजै सकिन्थ्यो । तर, अचेल उस्तै प्रकृतिको घट्ना घट्दा पनि नीजि सरोकारको मात्रै विषय बन्दैछ । के ढाट्नु ! घर–परिवार भुलेर वेपताहुनेहरू जिवित या मुर्दा हुन्, कसै प्रति पनि सहानुभूति जाग्नु छाडि सकेको छ । घर–पारिवार प्रतिको उतरदायित्व वोध गर्न नसक्नेहरुको लागि यतातिर संवेदनशिल हुन छाडि सकेका छौ । हुदाहुदा, यस्तो प्रकृतिका लासहरू चन्दा उठाएर नेपाल पठाउनु कति उपयुक्त हुन्छ ? भन्नेसम्मको वहस उठान हुन थालिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा उक्त डकुमेन्ट्री देखाएर सहानुभूति बटुल्नु बहायक अर्को विकल्प देखिन । त्यसैले मैले हार गुहार गर्नु पर्ने जति सबैलाई आमाको आशु देखाएरै गरेको हुँ । यसरी हजुरको दुःख देखाई हिडेर मैले गलत गरे या सहि ? त्यो त म जान्दिन । यदी हजुरको नजरले गलत देखेमा माफी चहान्छु । तर, पिएनसिसिका प्रतिनिधि र किरात याक्थुङ चुम्लुङ लगायतका सहयोगीहरू, हजुरको दुःख देखेरै शव पठाउन तत्पर भएका हुन् ।
साँचि ! आमा आफैले चै उक्त भिडियो हेर्न पाउनु भयो कि भएन होला ?
आमालाई जिज्ञासा लाग्न सक्छ –मैले पिएनसिसि र याक्थुङ चुम्लुङलाई नै किन गुहारे ? दुतवासलाई किन गुहारीन ? आमालाई थाहाहोस– पिएनसिसि तेही संस्था हो जसले मलेसियामा बेखवर ढंगले भासिएको छोराको बारेमा सोधखोज गर्न क्यामेरा भिरेर हजुर सम्म आईपुगेको थियो । दुःखमा तेत्रोबिधि चासो राख्नेले आपत परेको बखत पनि साथदेला भन्ने विश्वासले नै गुहार्न पुगेको हुँ । याक्थुङ चुम्लुङ त हाम्रो समुदायको मूलघर नै भैगयो र परेको बेलामा ओत लाग्नुको लागि घरको मुखताक्ने हाम्रो स्वभाविक चलन पनि त हो । जहासम्म दूतवासलाई गुहारिन कि ! भन्ने लागेको भए, आमालाई जानकारी होस– दूतवासको समन्वय बेगर यस्तो प्रकृतिको शव पठाउनु कठिन हुन्छ । तर, अवैधानिक भएर बसेकाहरुको हकमा शव पठाउदा लाग्ने खर्च बेहोर्न दूतवास बाध्यकारी नहुने रहेछ । र, आमालाई यो पनि थाहाहोस –सरकारी कामकाज गर्ने तौरतरिका विदेशमा पनि उस्तै हुन्छ, जस्तो देशमा हुने गर्छ । अव यो नसोध्नु होला –विदेशमा पनि सरकारबाट दिईने सेवा सुविधा पाउन पहुच हुनु र नहुनुले अर्थ राख्छ ?
आमा ! हजुरको जीवनमा घटेका घट्नाहरु सुन्दा मात्रै पनि फिलिमको कथा झै लागेर आउछ । बोल्नु त केमेरा अगाडि उभिएर बोल्दा थोरै बोल्नु भएको छ तर जति बोल्नु भएको छ हजुरले वाँचेको जिन्दगानी बुझ्न तेती काफी छ । ‘एकमात्र सन्तान छोरालाई कोखमा थमाई राखेर मुग्लान हिडेको लोग्नेको अहिलेसम्म अत्तोपत्तो नहुनु, त्यहि एउटा छोरा पनि धन कमाउने नाममा मलेसिया जानु र बाउ जसैगरि लापता हुनु अनि मृत्युको खवर आउनु, वंशपरम्परालाई निरन्तरता चलाउन अंकुराएको मुना(नाती) दैवले चुडेर लानु, छोराले भुल्यो त के भयो बुहारीले त छाडेर गकी छैन नि ! भनेर मन थामीदिने बुहारी पनि एक्लो पारिराखेर भगवानको भैजानु, अन्ततः वंश हिडाउने बाटोमा पूर्णविराम लाग्नु !’ अक्सर यस्ता दृश्यहरु कुनै फिलिमका लागि कल्पना गर्न सकिएला भन्ने लाग्दछ । तर, यो पत्याई नसक्नुको वास्तविकता आमाको जीवनले भोगिरहेको दुखद संयोग हो । आमाको जीवनका यस्ता यथार्थतालाई देख्दा लाग्छ –एकवारको जुनीले दुखको सगरमाथा थामेर बाच्नु पर्ने दिन पनि आईलाग्दो रहेछ । खैर, जानेहरुले किन फर्किनु जान्दैनन् ? –म आफैपनि एकजना अरपे हुनुको नाताले चिन्तित हुदै आमालाई बुझ्ने प्रयत्न गरेको छु, कि ! –परदेशले हजुरलाई पीडा बाहेक अरु केही दिएन । जीवन सुम्पिएको लोग्ने मुग्लानले खोसिदियो । भएको एउटा छोरा मलेसियाले निलिदियो । खै किन हो, परदेश लागेको हजुरको परदेशीहरु पर…को देश कै भयो । आमालाई पनि त आफ्ना परदेशीहरु संग यसैमा गुनासो होला नि है !
हुनत ‘जीवन संग जोडिएर आएकी अर्धाङ्गिनीको जिन्दगी घरको न घाटको स्थिति सम्म पुर्याउने गरि उतै भासिनु पर्ने तेस्तो के कारण पर्यो ?’ भनेर हजुरको मुग्लानेलाई सोध्नु पर्ने सवालको गुञ्जाईस अझतक छ छैन ! त्यो त म जान्दिन । यति जान्दछु आमाको सिउदो माथि प्रश्न गर्ने हक मलाई छैन । तर, अरपे छोराको सन्दर्भमा भने गुनासो गर्न वाहेक अव वाकी केही रहेन । यदि समयमै भेट्न सकेको भए म आफै पनि सोधिदिने थिए,– ‘हाउ दाई ! नौ महिना गर्भमा बोकेर जन्मदिने आमालाई नौ धारा आँशुमा डुबाएर बेखवर हुनु पर्ने के कारण पर्यो ?’ अफसोच, मैले भेट्दा दाई शवगृहको चिसो बकासमा चिर निन्द्रामा हुनुहुन्थ्यो । यस्ता तमाम सवालहरु अनुतरीत जमेर कक्रक्क परिसकेको थियो ।
अकारण पर–परहुदै परलोक पुगेको परदेशी छोरासंग आमाको गुनासो जीवनभर रहला नै ! तर असमयमै कसरी तेसो भयो ? कारण थाहा पाउनु एउटी आमाको हक हो भन्ने पनि लाग्दो होला । म आमालाई आफूले थाहा पाएसम्मको जानकारी गराउदै छु,– ‘पछिल्लो समय संगै काम गरेका साथीहरूको भनाईमा दाई अत्याधिक मादक पदार्थ सेवन गर्नु हुन्थ्यो रे । तेसरी पिउनुको रहस्य चै उनीहरुले पनि पत्तो पाएका रहेन छन । निश्चयपनि अस्पतालमा भर्ना हुदैगर्दा देखिने गरिको घाउ नै लिएर भर्ना हुनु भएको हो । तर, घाटीमा निस्केको गिर्खा र पछि फुटाउदा बिग्रेको घाउ बहाना मात्रै हो, लगेको त रक्सीले नै हो भन्ने उनीहरूको ठहर छ ।’ म भन्छु– उनीहरूले बाहिर जे देखे त्यही भने तर कलिलो छोरा गुमाउनु, त्यसमाथि असमयमै विदुर हुनुको भित्री पीडा उनीहरूले देखेनन् । दाईले पनि देखाएनन् । दाईको भित्री पीडाको भेद खुले पछि भने तिनै साथीहरूले अनुमान गरे –भित्री पीडा भुलाउनुको लागि तेसरी पिउथेछन् । साथीहरुले रक्सी पिउनुको कारण अनुमान गरे जसैगरि हस्पिटलका डक्टरले पनि डेथ सर्टिफिकेटमा लेखिदिएको थियो –क्यान्सर ।
आमा ! यदी दाईले त्यही बहानामा पिएको हो भने छोटो बुद्धि गर्नु भो भन्न म कन्चुस गर्दिन । किनभने जिन्दगीलाई दाईले साच्चिकै बुझेका भए रक्सिको साहरामा पार पाईन्छ भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुनुहुन्थ्यो र बाँकी जिन्दगीलाई सकरात्मक सोचले अगाडी लान सक्नु हुन्थ्यो । किनकी नयाँ ढंगले जिन्दगीलाई आगाडी बढाउने बहाना धेरै थिए । जस्तो कि आधा उमेर त सिंगै नै बाँकी थियो । साँचि, आमा आफैले पनि त छोरा फर्किएर आए जोडी बाधिदिएर नयाँ घरजाम गराई दिने सपना देख्नु हुन्थ्यो नि हगि !
‘तँलाई हेरेर जसरी मैले जीउनु जाने, तेसैगरि मलाई हेरेर तैले जीउनु सक्दैनस ?’ –पुत्र र पत्नी वियोगको भारी बोकेर जिन्दगी देखि भाग्दै तेतिपर सम्म पुगेको सुईको पाउनु भा भए आमा आफैले पनि छोरालाई सोध्नु हुन्थ्यो होला है ! किनपनि यो सवाल गर्नु हुन्थ्यो होला ठान्छु भने आमाले जीउनु भएको परिवेश पनि लगभग उस्तै न हो । तर, हजुरलाई त्यो हक जताउने मौका समेत छोराबाट प्राप्त भएन । सोच्छु– पत्नी गुमाउनु पर्दाको पीडा खपिरहेको एउटा श्रीमानले, छ दशक देखि एक्लो जिन्दगी काटिरहेकी अर्की श्रीमतीको पीडालाई किन देख्न सकेन ? पुत्र गुमाउनु पर्दाको पीडा भोगेको एउटा बाउले, बुढेसकालमा छोरा गुमाउनु पर्दा हुन सक्ने अर्की आमाको पीडालाई किन बुझ्न सकेन ? हो, यहीनिर आमाको जीवन हेरेर मलाई महसुस भएको छ –हामी छोरा मान्छे हदसम्मको निर्दयी र निष्ठुरी पनि हुन सक्दा रहेछौ ।
उज्यालो पछि अध्यारो हुनु जति प्राकृतिक छ, अध्यारो पछि उज्यालो हुनु पनि उति नै प्राकृतिक छ । यो जान्दाजान्दै पनि उज्यालो भोग गरि रहेको हामी एक्कासी अध्यारोले छोपिदा अतालिने रहेछौ र अध्यारोमै अल्मलिदा रहेछौ । कमैले मात्रै अध्यारोलाई भोली आउने उज्यालोको रूपमा जीवनमा अनुसरण गर्न सक्दा रहेछन । हजुरलाई मैले ति कमै मध्येको एक मानेको छु –आमा । हजुरले यहि प्राकृतिक सत्यलाई बुझेर नै त होला नि, छोरा सास छदै आवोस भन्ने आस गर्नु भो, फेरी जोडी बाँधिदिएर घरजम बसाई दिने कल्पना गर्नु भो । विडम्बना हजुरको छोराले प्राकृतिक सत्यलाई चिर्न सकेन । उ अध्यारो मै रुमलियो । एउटा पाटोलाई नै पूर्णता ठान्यो । अन्ततः स्वर्गवासी श्रीमती र छोराको मायाले तानिएर स्वर्गकै बाटो समात्यो । र, एउटी आमाको कथा वियोगान्तमा पटाक्षेप भयो ।
तर, आमा ! यो हजुरको एक्लो कथा हैन । परदेशी छोराको पर्खाईमा ओवानो आँखा लिएर बाटो कुर्ने धेरै आमाहरू छन् –देशमा । आमाको विश्वास माथि कुठाराघात गर्ने रत्नदाईहरू धेरै छन –विदेशमा । शोकको यो घडीमा देशबाट आमाहरुले र विदेशबाट हामी छोराहरुले कामना गरौ –देश फर्किने बाटो भुलेर अलमलिएका परदेशीहरु जीवित फर्किउन । ताकी फेरीफेरी बकासवन्दी गरेर कसैलाई पठाउनु नपरोस ।
लिपिबद्धरुपमा ब्यक्त भएका भावनालाई एकपल्ट सरसर्ती पढे । मनमा उब्जेको उकुस मुकुस लाई पुन महसुस गरे । अनि आफैलाई सोधिहेरे, – यो एकलाप हो कि चिठ्ठी ?
चिठ्ठी भनु –ढाँचा मिलेको छैन । र पनि मैले तुरुन्त निर्कौल गरे –ढाँचा नमिले नि आमासम्म पुर्याउछु ! यो सोचेर कि ! शवसंगै एट्याज भएर पुगोस।
तेसपछि लिपिवद्घ कागजको पन्नालाई पट्याएर खाम भित्र हुले । खामको दायाँ पट्टी ठुलो अक्षरमा लेखे –
‘शव आज वेलुकीको फ्लाईटबाट जाने भयो ।’ किरात याक्थुङ चुम्लुङ र पिएनसिसि मलेसियाका प्रतिनिधि दुवैतर्फबाट खवर पाएँ । फोन गरेर उनीहरुले यो पनि भने,– दिउसोतिर अस्पतालमा भेटौ र वकासवन्दी गर्नु पहिला श्रद्घाञ्जलीको फूल चढाएर विदा गरी पठाऔ ।
‘दिउसो भनेको कति वजे ?’ –एघार बाह्र वजेतिर कल गरेर दिउसो भन्नेलाई के सोध्नु त ! उनीहरुले प्राष्ट्याए,– क्यासकेट कम्पनीले नै अहिले भर्खर कल गर्यो । हामी हिड्न लागेको, छिटो गरेर सिधै उतै आउनु।
हतार हतार गरेर अस्पतालको शवगृह पुग्दा किरात याक्थुङ चुम्लुङ र पिएनसिसि मलेसियाका प्रतिनिधि लगायत पाँचसात जना कम्पाउण्डमा हुजुप्प भईरहेका थिए । क्यासकेट कम्पनीका स्टाफहरु हतारो लगाउदै रहेछन– छिटो गर छिटो, यहा धेरैबेर राख्न मिल्दैन ।
श्रद्घाञ्जलीको नाममा तेत्रोविधि के नै गर्नु थियो र हामीलाई ! वस् अन्तिम पटक शवको अनुहार हेर्ने र श्रद्घाको दूईथुङ्गा फूल समर्पण गर्नु न हो । तेत्तिगर्न हामीले कति नै समय लिन्थ्यौ र ? तैपनि क्यासकेट कम्पनीका स्टाफहरुले हाम्रो भावना बुझिराखेका थिएनन् । सम्भवत: पैसाको पछि कुद्नेहरुका दील हुदैन।
रातो मलमलले मोडेको बकास टेवलमा थियो । वकास भित्र रत्नदाई कहिल्यै नउठ्ने गरि सुतेका छन भनेर बुझ्न मलाई कठिन भएन । हामी पालैपालो वकासको नजिक गयौ, शवको अनुहार हेर्यौ र श्रद्घाको फूल चढायौँ । हामीले अन्तिम विदाई गर्यौ।
‘सकियो कि अझै पनि केही गर्नु वाँकी छ ?’ –सोध्नेले वकासको ढकानी लगाउने सुरसार गर्दै थियो । क्यासकेट कम्पनीका स्टाफहरुलाई कति हतार छ भन्ने प्रष्ट देखिदै थियो । हामीले बुझ्यौ –सोध्नको लागि सोध्दैछ।
‘सकियो सकियो ।’ हामी मध्येबाटै कसैले आवाज दियो ।
क्यासकेट कम्पनीका स्टाफहरुले रत्नदाईको शवलाई वकासवन्दी गर्न सुरु गरे । वकासमा सील मारे । शवको नाम, ठेगाना अनि रिसिभ गर्नेको नाम, सम्पर्क नम्बर लेखिएको कागज वकासमा टाँस्न शुरु गरे । तिनीहरुको हातमा ए–फोर साईजको पेपर देखे पछि म झसंग भए । आफुले आफैलाई सोधे –चिठ्ठी खै ?
ल्याईन भन्ने थाहा हुदाहुदै पनि हात गोजी छाम्न पुगिहाल्यो । हतारमा तयारी चिठ्ठी गोजीमा हाल्न भुलेको पनि याद आयो । मनमनै भने –ला…बिर्षिएछु।
तेतिन्जेल सम्म क्यासकेट कम्पनीका स्टाफहरुले तयार पारिसकेका थिए– आमालाई पार्सल।
अघिल्लो लेख मलेसियाबाट हुने चार्टर्ड उडानमा मालिन्डो एयर थपिए,तर श्रमिकहरु अझैपनि महँगो टिकटको मारमा!
पछिल्लो लेख फाल्गुनन्द एकता समाज मलेसियाद्वारा पीडितहरुलाई रु.६ लाख बढी आर्थिक सहयोग।